मधुपर्क २०६७ माघ – Page4– मझेरी डट कम
पुर्खाले झोपडीलाई जीवन आश्रम मान्न नसकेको भए ? मन खुल्दुलिन्छ । मन खुल्दुलिनु ! के ? सोधेँ, आफैँसित । भन्न थाल्छ मन । मन खुल्दुलिनु त चासो उर्लिनु पो रैछ । एक अर्थमा । अनेक कोण र आयाम बोक्छ यो खुल्दुलिनुले । सरोकारले तानातान गर्दै गर्‍यो । त्यो सरोकार सान्दर्भिक थियो । परिवेशमूलक सरोकार थियो साहित्यिक पत्रकारिता ।
‘मधुपर्क’ नेपाली वाङ्मयको अभिन्न अङ्ग
ठूलो उत्साह र उमङ्ग लिएर प्रकाशित हुनु अनि अल्प अवधिमा नै बिलाउनु नेपालका साहित्यिक पत्रिकाको साबिक रोग हो । वि.सं. १९५५मा प्रकाशित ‘सुधा सागर’ देखि लागेको यो सरुवा रोगले अहिलेसम्म साहित्यिक पत्रिकालाई गाँज्न छोडेको छैन । यस रोगको शिकार भएर कयौँ साहित्यिक पत्रिका हुर्कन नपाउँदै मृत्युवरण गर्न वाध्य भएका थुप्रै उदाहरण छन् तर वि.सं.२०२५ साल जेठदेखि प्रकाशन प्रारम्भ भएको ‘मधुपर्क’ अनेकौँ बाधा अवरोधका खाल्डा पार गर्दै आफ्नो निरन्तरता कायम राख्न सफल भयो र आज ५०० अङ्क प्रकाशनको स्थितिसम्म आइपुगेको छ ।
“मधुपर्कको ५०० औँ अङ्क निस्कँदै छ, कमलबाबु” श्रीओम रोदनले फोनमा भन्नुभयो । अमेरिकासम्म पुगेर तरमारेर फर्केका रोदनलाई मैले झर्केर अङ्ग्रेजीमै सोधेँ- ‘सो हृवाट !’ अनि पूरकको रूपमा थपेँ- “मेरो ‘नेपाली’ पनि कम छैन, ५२ औँ वर्षको भैसक्यो क्या !” रोदनले ओठे जवाफ फर्काए-” तपाईंको ‘नेपाली’ भर्खर २०० अङ्क निक्ल्यो, हाम्रो ‘मधुपर्क’को हामी ५०० अङ्क निकाल्ने तर्खरमा छौँ । तपाईंले हामीसँग फूर्ति गर्ने ?” अवश्य, मेरा मित्र रोदनले त्यति खस्रो भाषामा त्यसो भन्नुभएको थिएन ।
प्रस्तुत कार्यपत्रमा गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित नेपाली साहित्य र विविध विषयको मासिक पत्रिका मधुपर्कका विशेषाङ्कले नेपाली साहित्यमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसका लागि २०२९ सालदेखि २०६७ सालसम्ममा मधुपर्कले प्रकाशित गरेका जम्माजम्मी ४३ ओटा विशेषाङ्कको सर्वेक्षण र विश्लेषण गरिएको छ । यसले साहित्यिक विधा, सान्दर्भिक विषय र अन्तरविषयक अध्ययनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विभिन्न विशेषाङ्कहरू प्रकाशित गरेको पाइयो । प्रारम्भमा राजा-रानीको जन्मोत्सवलाई विशेषाङ्क प्रकाशनको अवसर बनाए पनि २०५० सालदेखि यसले आफ्नो अङ्क एक सुरु हुने जेठ महिनालाई मुख्य आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
मधुपर्कको दोष छैन
साहित्यिक पत्रकारितासँग जोडिएका मेरा धेरै स्मरणहरू छन् । कतिपय प्रकाशन पनि गरेको छु भने कतिपय स्मरणबाट टाढा भइसके । समय व्यतीत हुँदै जाँदा र उमेरको कारणले कतिपय स्मरणहरू त्यसै हराउँदै जाँदा रहेछन् । त्यतिबेला म वामआन्दोलनमा थिएँ । पञ्चायती सरकारको विरोधी आन्दोलनका क्रममा जेलनेल पनि भोगियो । पञ्चायतकालको जगजगीमा पत्रिका निकाल्नु वा सरकारको विरोधमा बोल्नु कठिन काम थियो ।
नेपाली पत्रत्रिकाहरूको प्रकाशन परम्परालाई हेर्दा सर्वप्रथम विक्रम संवत १९४३ सालमा भारतको बनारसबाट युवककवि मोतीराम भट्टको सम्पादकत्वमा गोर्खाभारत जीवन पत्रिका प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसको एक दर्जन वर्षपछि वि.सं. १९५५ सालमा नेपालभित्रबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो साहित्यिक पत्रिका सुधासागर हो । यो पत्रिका नरदेव मोतीकृष्ण शर्माको सम्पादकत्वमा प्रकाशित भएको हो ।
खडेरीमा वर्षा भएर आओस् मधुपर्क
मैले जीवनको एउटा खण्डमा गोरखापत्र संस्थानमा काम गरेको थिएँ । अहिले त धेरै समय पार भइसकेको छ । मलाई स्वास्थ्यले पनि धेरै साथ दिएको छैन तर मसँग जोडिएका स्मृतिहरू कति छन् कति । मधुपर्कसँग जोडिएका सन्दर्भ र स्मृतिबारे म प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहान्थेँ तर अस्वस्थ्यताका कारण छोरा मदनराज थापाको सहारामा जवाफ दिँदैछु । अहिले मलाई धेरै बोल्न पनि मिल्दैन । यसमा दुःख नमान्नुहोला ।
साहित्यिक पत्रिकाको अभाव भइरहेको बेला मधुपर्क प्रकाशित हुनु ज्यादै राम्रो थियो । गुणस्तरीय कागज, छपाई, आकार ठिक्कको थियो । सबै राम्रो थियो, पछि खस्कियो । कागज पनि त्यति राम्रो भएन, आकारमा पनि एकरूपता राख्न सकेन । मेरो भनाई केहो भने कागज, छपाई र आकारमा एउटा ‘स्तर’ कायम गर्न सकेन । सस्तो कागज खोज्ने होइन, बरु मूल्य बढाइदिए हुन्छ नि ! पत्रिकाको सङ्ग्रहकर्ताका लागि गुणस्तरीय कागज, छपाइ र आकारमा एकरूपता हुनु आवश्यक छ ।
म आफू प्रकट भएको आधार नै ‘मधुपर्क’ हो
वि.सं. २००२ देखि २००४ साल साउनसम्म गोरखापत्र संस्थानमा जागिरे जीवन बिताएँ । २००४ सालमा प्रजातन्त्र नभएको बेला पनि पद्म शमशेरको शासनकाल उद्धार किसिमको थियो । त्यसबेला भर्खरै दैनिक भएको थियो गोरखापत्र र साहित्यिक रचनाहरू पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित हुन्थे । मलाई संयोग जुरेको भन्नुपर्छ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ सम्पादकीय विभागमा आउनुभयो र म पनि त्यसैमा थिएँ । सम्पादकीय विभागमा बसेर सम्पादन गर्दा नेपाली व्याकरणका क्षेत्रमा बसेको बानीले मलाई निकै फाइदै भयो ।
साहित्यिक पत्रिकारितामा मधुपर्कको योगदान विषयक विचार गोष्ठीको प्रतिवेदन
नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहासमा ‘मधुपर्क’ पत्रिकाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपालकै जेठो समाचार पत्रिका ‘गोरखापत्र’ कै प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित हुँदै आएको ‘मधुपर्क’ ले २०६७ साल माघ अङ्कलाई ५००औँ अङ्कका रूपमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा गत २०६७ मङ्सिर १ गते काठमाडौँको बागबजारस्थित अशोका होटलमा ‘साहित्यिक पत्रकारितामा मधुपर्कको योगदान’ विषयक एक दिवसीय विचार गोष्ठी सम्पन्न गर्‍यो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विजय चालिसेले सभाध्यक्षता ग्रहण गर्नु भएको थियो ।
नेपाली साहित्यिक पत्रकारितामा ‘मधुपर्क’को योगदान
डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम
नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको इतिहास त्यति लामो नभए पनि नेपाली साहित्यमा आधुनिकताको प्रवर्तन गर्ने ‘शारदा’ (वि.सं. १९९१) पूर्वको परिवेश नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको पृष्ठभूमि हो भने ‘गोरखापत्र’ (१९५८) जस्ता समाचारप्रधान पत्रिका र आवधिकरूपमा प्रकाशित भएका ‘शारदा’ पूर्वका पत्रिकाहरूले साहित्यिक क्षेत्रमा पनि योगदान दिएकाले यसलाई पनि नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि ‘शारदा’ को प्रकाशनसँगै व्यवस्थित साहित्यिक पत्रकारिताको थालनी भएको देखिन्छ ।